Maalmahan, bilowga ah khadka soo saarista bacriminta dabiiciga ah iyadoo la raacayo hagitaanka qorshaha ganacsiga saxda ah wuxuu hagaajin karaa keenista bacriminta aan waxyeellada u lahayn beeraleyda, waxaana la ogaadey in faa'iidooyinka isticmaalka bacriminta dabiiciga ay aad uga badan yihiin kharashka dejinta geedka bacriminta dabiiciga ah, oo aan kaliya loola jeedin faa'iidooyinka dhaqaale, laakiin sidoo kale oo ay ku jiraan deegaanka iyo waxtarka bulshada. Beddelashadaqashinka dabiiciga ah ee bacriminta dabiiciga ah waxay ka caawin kartaa beeralayda inay kordhiyaan nolosha ciidda, inay hagaajiyaan tayada biyaha, inay kobciyaan wax soo saarka dalaga iyo ugu dambeyn inay kordhiyaan wax soo saarkooda. Markaa waa aasaaska maalgashadayaasha iyo soosaarayaasha bacriminta inay bartaan sida qashinka looga dhigo bacriminta iyo sida loo bilaabo ganacsiga bacriminta dabiiciga ah. Halkan, YiZheng wuxuu ka hadli doonaa qodobbada u baahan fiiro gaar ah ee dhinacyada soo socda marka la bilaabayowarshad bacriminta dabiiciga ah.
Maxaa loo Bilaabayaa Nidaamka Soo-saarista Bacriminta Organic?
Ganacsiga bacriminta dabiiciga ah oo faa'iido leh
Isbeddellada caalamiga ah ee warshadaha bacriminta ayaa tilmaamaya bacriminta bey'adeed iyo kuwa dabiiciga ah ee kordhiya waxsoosaarka dalagga isla markaana yareeya saamaynta taban ee waarta ee deegaanka, ciidda iyo biyaha. Dhinac kale, waa la ogyahay bacriminta dabiiciga ah inay tahay cunsur muhiim u ah beeraha oo leh suuq suuq leh, horumarka beeraha, faa'iidooyinka bacriminta dabiiciga ah ayaa si muuqata u muuqda. Aragtidan, waa mid faa'iido leh oo macquul ah ganacsatada / maalgashadayaashabilow ganacsiga bacriminta dabiiciga ah.
Sanadihii la soo dhaafay, dowladuhu waxay bixiyeen dadaallo taxane ah oo lagu taageerayo beerashada dabiiciga ah iyo ganacsiga bacriminta dabiiciga ah, oo ay ku jiraan kaalmooyinka bartilmaameedka ah, maalgashiga suuqa, ballaarinta awooda iyo kaalmada maaliyadeed, kuwaas oo dhammaantood dhiirrigelin kara isticmaalka ballaaran ee bacriminta dabiiciga ah. Tusaale ahaan, dowladda Hindiya waxay bixisaa dhiirrigelinta bacriminta dabiiciga ah illaa Rs.500 / halkii hektar, iyo Nigeria, dowladda waxaa ka go'an inay qaaddo tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah kor u qaadista isticmaalka bacriminta dabiiciga ah si loo horumariyo nidaamka deegaanka ee beeraha Nigeria si loo abuuro waara shaqooyin iyo hanti.
Acabsida cuntada dabiiciga ah
Dadku waxay aad ugu baraarugeen nabadgelyada iyo tayada cuntada maalinlaha ah. Baahida loo qabo cuntada dabiiciga ah ayaa koray tobankii sano ee la soo dhaafay oo xiriir ah. Waa aasaasi in la ilaaliyo badbaadada cuntada iyadoo la adeegsanayo bacriminta dabiiciga ah si loo xakameeyo ilaha wax soo saarka isla markaana looga fogaado wasakheynta ciidda. Sidaa darteed, kororka miyirka ee cuntada dabiiciga ah ayaa sidoo kale ku habboon horumarinta warshadaha wax soo saarka bacriminta dabiiciga ah.
Palaabada ceeriin ee bacriminta dabiiciga ah
Waxaa jira qiyaaso badan oo qashinka dabiici ah oo maalin walba laga soo saaro adduunka oo dhan. Tirakoob ahaan, waxaa jira in ka badan 2 bilyan tan oo qashin ah adduunka sannad kasta. Alaabta ceyriinka ah ee lagu soo saarayo bacriminta dabiiciga ah waa kuwo faro badan oo baaxad leh, sida qashinka beeraha, sida cawska, cuntada soybean, suufka iyo haraaga boqoshaada), xoolaha iyo digada digaaga (sida digada lo'da, digada doofaarka, xaarka idaha, digada fardaha iyo digada digaaga) , qashinka warshadaha (sida vinasse, khal, haraaga, haraaga kassava iyo dambaska sonkorta leh), qashinka guryaha (sida qashinka cuntada ama qashinka jikada) iyo wixii la mid ah. Waa alaabada ceyriinka ah ee faro badan taas oo ka dhigaysa ganacsiga bacriminta dabiiciga ah mid caan ka ah adduunka oo dhan.
Sida loo doorto goobta
Goob Loo Soo Jeediyay Warshad Bacriminta Dabiiciga ah
Xulashada goobta goobta loogu talagalay warshad bacriminta dabiiciga ah waa inuu raacaa mabaadi'da:
Should Waa inay ku dhowdahay meel u dhow keenista alaabta ceeriin ee wax soo saarka bacriminta dabiiciga ah, ujeedadiisuna tahay yareynta qiimaha gaadiidka iyo wasakheynta gaadiidka.
● Warshaddu waa inay ku taal meel u dhow gaadiid ku habboon si loo yareeyo caqabadaha xagga saadka iyo qiimaha gaadiidka.
● Qiyaasta dhirta waa inay qancisaa shuruudaha habka farsamada wax soo saarka iyo qaabeynta macquul ah oo ay u dhaaftaa meel ku habboon horumarin dheeraad ah.
● Ka fogow aagga la deggan yahay si looga fogaado inay waxyeello u geysato nolosha dadka deegaanka maxaa yeelay waxaa jira in badan ama ka yar ur gaar ah oo la soo saaray inta lagu gudajiro geeddi-socodka soo-saarista bacriminta dabiiciga ah ama gaadiidka alaabta ceyriinka ah.
Should Waa inuu ku yaal meelaha fidsan, cilmiga dhulka, miiska biyaha oo hooseeya iyo hawo fiican. Intaas waxaa sii dheer, waa inay ka fogaataa meelaha u nugul bogagga, daadadka ama burburka.
Site Goobtu waa inay ahaato mid la jaanqaadaysa xaaladaha deegaanka iyo dhowrista dhulka. Si buuxda u isticmaal dhul bilaa camal ah ama dhul cidla ah oo aanad ku fadhiyin dhul beereed. U isticmaal meesha asalka ah ee aan la isticmaalin intii suurtagal ah, ka dibna waad yareyn kartaa maalgashiga.
● Kuwa warshad bacriminta dabiiciga ah waa la doorbidayaa Aagga Warshaddu waa inuu ahaadaa qiyaastii 10,00-20,000㎡.
● Meeshu ma fogaan karto inay ka fogaan karto xadhkaha korontada si loo yareeyo isticmaalka tamarta iyo maalgelinta nidaamka korantada. Waa inuu noqdaa meel u dhow biyaha si loo daboolo baahiyaha wax soo saarka, nolosha iyo biyaha dabka.
Erey ahaan, qalabka laga helayo isha waxay u baahan yihiin in la dhiso warshadda, gaar ahaan digada digaagga iyo qashinka dhirta, waa in runtii laga helaa suuqa iyo beeraha digaagga oo u dhow dhirta la soo jeediyay.